Somaliya waxay isku dayaysaa inay cagaheeda isku taagto suuragal ma u tahay? - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Somaliya waxay isku dayaysaa inay cagaheeda isku taagto suuragal ma u tahay?
Dhacdooyinkii u dambeeyay ee ka dhacaayay Myqdisho waxay tilmaamaysaa in Muqdisho welli ka soo kaban burburkii dawladnimo oo ay u baahan tahay in la nasiyo sida uu qabo Cali Calasow oo Muqdisho ku noolaa tan iyo burburkii. ” Markasta waa Muqdisho halka magaalooyinka kale ay degan yihiin ayuu raaciyay.
Qaska ugu weyn waxa wada oo bilaabay laba fadhiid oo hore oo ku magacownaa madaxweyneyaal hore haddase noqday kaaba qabiilo ku awrkacsanaya magacaHawiye, kuna fekeraya dhiig la daadsho ayaa kursi lagu gaaraa.
Waxaaanse aan ognahay inay wataan oo dabada ka riixayaan kooxda beesha caalamka oo aan arki karin madaxweyne Farmaajo, waana kuwa dhibka weyn ku haya qaranka, waana sheegi karnaa laba arimood oo waaweyn.
1-Wuxuu diidey in Somaliya looga taliyo xerada XALANE, wuxuu diidey inuu ka tanaansulo badda siduu isagu inoo sheegay oo lacag xataa loo balan qaaday, waxayna ka urinayaan Turki iyo Qadar oo hadda wada mashaariicda ugu badan iyo dib u dhiska ciidanka mudadii 4 sanno. Tan ugu weyna Maraykanka hadda arkayo inaanu rajo fiican ka lahayn madaxweyne Farmaajo oo dalkan ku wada inuu noqdo mid xoogleh.
2-Waxay aad uga soo horjeedaa fikirka dheer ee ah in Somaliya ayna marnaba ka soo bixin dawlad adag oo hanata dalkoo dhan haddii kale ay ka soo socoto khatar geeska Afrika ah ayna imaan karaan dawladaha Ruushka iyo Shiinaha. Sidaas darteedna ay muhiim tahay in markaste la helo caade qaate jooga afar sano kadibna la tuuro.
Madaxweyne Farmaajo ayaa tanaasul farabadan sameeyay iyagoo arkaya inuu dib u soo noqonayo, waxay hadda bixiyeen sidaan xogta ku helnay malaayiin doolar sidii ay u mijaxaabin lahaayeen, kuwa colaada hurinayana waa fadhiidyo aan marnaba la dooran doonin..
Somaliya waxay ku jirtaa biyo waxayna is leedahay ka bax, dagaalka ugu weyna wuxuu ka socdaa kooxda beesha caalamka oo ku hanjabtey inay dalka dabada u rogto. Waase suuragal inay casgaheeda ku istaagto haddii madaxweynaha hadda ayna inqilaabin kooxda caalamku.